Mashiinnada Baakidhka Baakidhka horay loo Sameeyay ee Warshad - Soo-saarayaasha, Shirkado Alaabad ah
Mashiinka Jumlada Jumladda Doypack Bag / Dambiisha Mashiinka Baakadaha
Mashiinnada Buuxinta Doypack-ka oo si buuxda otomaatig ah u buuxiya si ay u xiraan boorsooyin horay loo sameeyay. Powder, granulate, waxyaabaha cufan, macmacaanka, iyo dareerayaasha in la buuxiyo lana xiro.
Mashiinka loo yaqaan 'Doypack Pouch Mashiinka' ee loogu talagalay mashiinka jeebka 'doypack' ee mashiinka alaabta lagu buuxiyo oo si toos ah otomaatig u ah qaadashada bacda, buuxinta & shaabbadaynta.Waxay ku habboon tahay budada sida xawaashida, budada caanaha, Sonkorta Fiican iwm.
Kiishka premade waa xirmo ku habboon oo loogu talagalay budada cuntada, kaabsulka ama kiniinnada. Waxaa sidoo kale badanaa loo isticmaalaa baakadaha labaad ee kaabayaasha cuntada ee qayb ka kooban.
Taxanaha GPB ee mashiinada baakadaha kiishka ee GAOGEPAK premade ayaa ku haboon badeecada budada, waxsoosaarka granule, sheyga dareeraha ah iyo waxsoosaarka baakada si otomaatig ah u baakadeeya. Mashiinka wax lagu duubo ee bacda lagu qaato ee qiyaasta kala duwan leh (sida miisaanka badan ee madaxa, dareeraha dareeraha, auger buuraha iwm.), Wuxuu ku habboonaan karaa xirxirida otomaatiga ah ee granular, budada, dareeraha, dhejiska iwm.
GPB6 Jeexitaanka Gawaarida Gawaarida Gawaarida & Mashiinka Xirmooyinka Khatimidii
Mashiinka wax lagu duubo ee bacda lagu qaato ee qiyaasta kala duwan leh (sida miisaanka badan ee madaxa, dareeraha dareeraha, auger buuraha iwm.), Wuxuu ku habboonaan karaa xirxirida otomaatiga ah ee granular, budada, dareeraha, dhejiska iwm.